Dib-u-eegista Xilliga Premier League 20/21 – https://adanlove.wordpress.com
Xilli ciyaareed waali ah oo kubada cagta ah!
Waxaan saadaal ka bixiyay bilowga xilli ciyaareedka koox kasta oo Premier League ah. Waxaa la joogaa waqtigii dib loo eegi lahaa oo la arki lahaa sida koox walba u sameysay iyo sida aan ugu soo dhawaaday.
Arsenal – 8aad (61 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (8aad – 56 dhibcood)
Arsenal ayaa heshay 5 dhibcood oo ka badan intii ay heshay xilli ciyaareedkii hore laakiin waxay ku dhamaysatay si sax ah halkii ay xilli ciyaareedkii hore gaadhay, 8aad. Arsenal ayaa xilli ciyaareedka ku bilaabatay guul fiican oo ay ka gaadhay Fulham waxayna soo afjartay MW 1-aad iyada oo hoggaamiyeyaal ka ah horyaalka. Wixii intaa ka dambeeyay waxay ahayd hoos udhac madaama ay hoos udhaceen ilaa 15aad miiska. Kala badh xilli ciyaareedkii waxay ahaayeen 11aad laakiin laakiin 5 guul oo dhammaadka xilli ciyaareedka ah waxay la micno tahay inay ku dhammeysteen kaalinta 8aad ee miiska. Dhanka Arsenal waa markii ugu horreysay muddo 25 sano ah oo aysan haysan nooc ka mid ah kubbadda cagta Yurub. Waxaa jira warar xan ah oo ku saabsan milkiileyaasha cusub iwm iyo fiasco-ka Super League oo dhan ma aysan caawin sawirka Kroenke. Arteta ayaa laga yaabaa inuu sidoo kale soo dhawaado xilli ciyaareedka soo socda sidoo kale wuxuu sheegay inay xagaaga weyn u tahay Arsenal. Taageerayaasha Gunners waa mid dalbanaya laakiin rajada ay ka qabaan weligood kuma saleysna xaqiiqda. Willian wuxuu ahaa abysmal halka Partey uusan runtii shidin. Gabriel wuu fiicnaa xaga dambe. Xiddiga ugu weyn markale wuxuu ahaa Saka waana ciyaaryahan Arsenal ay dooneyso inay ceshato. Waxay garaaceen Man United, Chelsea (labo jeer), Leicester iyo Spurs, inkasta oo aysan waxba u ahayn inay si dhab ah ugu qayliyaan koox darajo weyn leh oo Gunners ah. Xilli ciyaareed kaliya ay ka walwalsan tahay kubbada cagta gudaha ayaa laga yaabaa inuu noqdo waxa ay Arsenal u baahan tahay laakiin waxay u baahan yihiin xagaaga weyn oo maalgashi ah.
Saadaalin – Arsenal ayaan u saadaaliyey inay ku dhamaysan doonto 6-aad laakiin way i daadiyeen.
Aston Villa – 11aad (55 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (17aad – 35 dhibcood)
Villa ayaa qaadatay xilli ciyaareed layaableh marka loo barbardhigo sanadkii hore halkaasoo ay ku badbaadeen maalintii ugu dambeysay. Guushii 7-2 ahayd ee ay ka gaadheen Liverpool iyo guul ay ka gaadheen Leicester furitaankii 5-tii kulan waxay la micno ahayd in ay ahaayeen 2-aad MW 5. Kala badh xilli ciyaareedkii in kasta oo ay kubbadda cagta qabsatay Dean Smith iyo kooxdii oo ay ku jireen kaalinta 8-aad ee miiska. Waxay kusii nagaadeen 9aad muddo dheer laakiin natiijooyinka liita ee aakhirka waxay ka dhignaayeen inay ku dhammeeyeen 11aad. Saxeex kasta oo Villa ahi sameeyo xagaagii wax buu u keenay kooxda. Lacagta kaashku waxay ahayd mid difaac ahaan aad u fiican ilaa dhaawicii uu qabay. Martinez wuxuu ahaa dhagax dhabarka dambe wuxuuna Villa ka ilaaliyay dhowr ciyaarood isagoo sameeyay badbaado aad u qurux badan. Watkins ayaa ahaa gooldhaliyahoodii ugu sareeyay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee Premier League halka Traore uu kooxda u keenay qaab ciyaareed iyo hal abuur. Ross Barkley ayaa xilli ciyaareedka ku bilaabay si qurux badan laakiin dhaawacyada ayaa la micno ahaa inuusan joogin meel u dhow qaabkaas dhamaadka. Martinez ayaa shabaqa ilaashaday 15 kulan oo Villa ah markii seddexaad ee ugu badan horyaalka xilli ciyaareedkan halka Watkins ay ku dhameysatay 14 gool. Liverpool, Leicester, Arsenal (laba jeer), Everton, Spurs, iyo Chelsea ayaa ahaa goolashii weynaa ee ay qaateen xilli ciyaareedkan. Haddii Villa ay heli karto daaqad kale oo adag xagaaga markaa shaki kuma jiro inay ku sii dhisi karaan guulahooda xilli ciyaareedkan. Dean Smith runtii sifiican ayuu qabtay.
Saadaalin – Waxaan saadaaliyay Villa inuu dhammeeyo ku dhowaad 17aad mar kale laakiin waxay si cad iigu caddeeyeen inaan khaldanahay.
Brighton iyo Hove Albion – 16aad (41 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (15aad – 41 dhibcood)
Brighton iyo Graham Potter waxay ka mid ahaayeen kooxihii ugu dhowaa xilli ciyaareedkan. Qaar ka mid ah indhaha weyn ee soo jiita kubada cagta laakiin la’aanta taabashada bukaan socodka ayaa la micno ah inay lumiyeen qaar ka mid ah ciyaarihii muhiimka ahaa ee xadadka wanaagsan. Booskooda ugu sareeya xilli ciyaareedkan wuxuu ahaa 8aad ee MW 2 halka aysan waligood hoos ugu dhicin aagga u laabashada. Waxay garaaceen kooxaha Liverpool, Spurs, iyo City qeybtii dambe ee xilli ciyaareedka kuwaasoo ahaa natiijooyin aad u ballaaran. Kulankoodii ugu dambeeyay ee gurigooda wuxuu ahaa guul soo laabasho ah oo 3-2 ah oo ay ka gaaraan City iyo taageerayaasha garoonka oo daawasho fiicnaan laheyd. Graham Potter waa maamule wanaagsan saxiixa Welbeck ayaa ka caawiyay inay soo baxaan halka Veltman uu isna ahaa iibsi wanaagsan. Lamptey wuxuu dhaawacmay mudo dheer halka Lallana isna uu ku jiray banaanka iyo dibada. Brighton waa inuu rajeeyaa inuu ilaaliyo Potter oo laga yaabo inuu saxeexo weeraryahan wanaagsan oo weerarka ah. Seagulls waxay leeyihiin saldhig ay ku riixaan miiska sare laakiin waxay u baahan yihiin inay qaataan fursadahooda.
Saadaalin – Waxaan saadaaliyay in Brighton ay riixi doonto wax aan ka sareynin 15th mana aysan sameynin.
Burnley – 17aad (39 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (10aad – 54 dhibcood)
Burnley ma aysan helin xilli ciyaareedyadii ugu fiicnaa ka dib markii ay ku dhameysteen 10ka xilli ciyaareed ee la soo dhaafay ma aysan soo saari karin qaabkaas. Mawqifkooda ugu sareeya wuxuu yimid dhamaadka MW 1 markay fadhiyeen 12aad laakiin taasi waxay ahayd markay hoos ugudhaceen ilaa 20aad hal dhibic. Jidka dhex maraya waxay dib ugu kaceen ilaa 15aad. Suuqa kala iibsiga oo xumaa ayaan runtii ka caawin Sean Dyche gabi ahaanba koox ay quudiyaan taageerayaasha tamarta ayaa la macno ahayd in ay sidoo kale lumiyeen. Pope wali wuxuu maamulay 11 nadiif ah inkasta oo difaac ahaan ay wali ahaayeen koox sare. Guulihii ay ka gaareen Arsenal, iyo Liverpool waxay ahaayeen xoogaa xiiso leh xilli ciyaareedkii. Burnley waxay ubaahantahay inay yeelato daaqad wanaagsan oo ay kula wareegto kooxda. Sean Dyche waa tababare adag laakiin uma maleynayo in dagaal kale oo heerka labaad ah uu yahay waxa uu doonayo. Taageerayaasha ku sugan garoonka ayaa caawin doona inkasta oo aan rajeynayo in ay yihiin xilli ciyaareedka soo socda.
Saadaalin – Waxaan sheegay in Burnley ay ku dhameysan doonto 5-ta boos ee ugu sareysa laakiin aysan kujirin hanjabaad heerka labaad ah. Way iska jareen inkasta oo ay uun badbaadeen.
La Soco Dib-u-Eegista Toddobaadka dambe.
Crystal Palace – 14aad (44 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (14aad – 43 dhibcood)
Palace ayaa heshay hal dhibic oo ka badan tii ay heshay xilli ciyaareedkii hore waxayna ku dhamaysatay isla meeshii saxda ahayd. Ma jiro horumar dhab ah laakiin hoos u dhac midna ma jiro. Xilli ciyaareedkoodu wuxuu ku bilaabmay si qurux badan guulo ay ka gaareen Southampton, United, iyo Everton taasoo u aragtay iyaga inay gaaraan heerka 5aad ee miiska kala sarreynta. Dhex-dhexaad xilli-ciyaareedkii in kasta oo ay ku jireen kaalinta 13-aad ee miiska. Marka la eego in ay aheyd xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee Hodgson isla markaana dhowr ciyaartoy ay ku dhowdahay dhamaadka qandaraasyadooda waa shaqo si fiican loo qabtay. Xagaagan wuxuu noqon doonaa mid weyn marka laga hadlayo qorista Palace halka ay weli u baahan yihiin inay helaan tababare. Mid ka mid ah bartilmaameedyada ayaa ah Frank Lampard in kasta oo ay tahay in la arko cida loo magacaabay. Ferguson iyo Eze waxay ahaayeen labada saxiix ee ugu sareyso dhalinyarada laakiin labaduba waxaa soo gaaray dhaawac ACL usbuucii la soo dhaafay ama wax la mid ah waxaana laga yaabaa inay maqnaadaan ilaa sanadka cusub. Batshuayi sidii loogu tala galay uma shaqeyn. Benteke wuxuu lahaa dib u soo cusbooneysiin inkastoo dhamaadka xilli ciyaareedka.
Saadaalin – Waxaan saadaaliyey inay Palace sii joogi doonto gudaha iyo hareeraha meesha ay joogaan waana ay sameeyeen.
Everton – 10aad (59 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (12 – 49 dhibcood)
Everton ayaa si xun ku bilaabatay xilli ciyaareedkii MW 6 iyaga ayaa ugu sarreeyay miiska laakiin xaqiiq ahaan may sii socon doonin. Waxay udhaceen sidii dhagax ilaa 10aad kahor intaaney u kicin bartanka xilliga. Aakhirkii wuxuu dib ugu laabtay 10aad kadib toddobaadyo sabool ah. 10 dhibcood oo ka badan tii xilli ciyaareedkii hore waa horumar. Alan, Rodriguez, iyo Doucoure waxay ahaayeen saxiixyo fiican inkasta oo ay sii joogi lahaayeen taam ahaansha dheer Everton waxay u badan tahay inay ka sareyn lahaayeen. Godfrey wuxuu sidoo kale ahaa saxiix wanaagsan dhanka daafaca sidoo kale. Calvert-Lewin wuxuu helay 16-gool wuxuuna kusii socdaa inuu horumar sameeyo xilli-cayaareedka. Toffees ayaa garaacday Chelsea, Leicester, iyo Arsenal laba jeer. Muhiimadoodu waxay noqon doontaa inay Liverpool ku garaacdo Anfield 0-2 MW 25. Waxay ahayd qaab ciyaareed qurux badan oo mid taageerayaasha ay jeclaan doonaan sannado badan isla markaana rajeynaya inay ku celceliyaan xilli ciyaareedyo badan. Everton waa koox si fiican u socota, waxaan u maleynayaa inay yihiin gooldhaliye adag oo laga yaabee inay garabka ka fogaaneyso inuu si joogto ah u ciyaaro. Furaha ayaa ah in qaar ka mid ah ciyaartoydaas ay taam noqdaan.
Saadaalin – Waxaan saadaaliyay in Everton ay ku dhameysan doonto 7th ama 6th laakiin toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa runtii dhaawacay fursadahoodii taas.
Fulham – 18aad (28 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (Ciyaar Off Champions)
Maalin maalmaha ka mid ah Fulham ayaa dallacsiin doonta oo ay sii joogi doontaa Premier League laakiin haddana mar kale ma ahayn xilli ciyaareedkaas. Fulham waxay ahayd mid kale oo ka mid ah kooxahaas. Scott Parker shaki kuma jiro inuu helay iyaga oo ciyaaraya kubad qurux badan laakiin tirada badan ee fursadaha ay seegeen kulamada ayaa la micno ah inay lumiyeen goolal fiican. Xaqiiqdii waa koox fiican oo la daawado haddii Parker uu igu dheganaado waan taageerayaa si aan ugu soo laabto Premier League. Waxay lahaayeen xagaa weyn oo ay laso saxiixdeen dhowr waxaanan dareemay in dhamaan saxiixyadu ay sifiican usocdeen. Ma aysan saxeexin weeraryahan inkasta oo Maja daaqaddii jiilaalku yara yara daahday. Areola, Aina, Lookman, Andersen, iyo Loftus-Cheek intuba waxay ahaayeen saxiixyo amaah ah waxayna dib ugu laaban doonaan kooxahooda xagaaga. Fulham waxay gaartay 17th daqiiqad kooban inta lagu jiro xilli ciyaareedka laakiin waxay kujirtay kaalinta 18aad inteeda badan. Guulihii ay ka gaareen Leicester, iyo Liverpool oo ay wehliyaan barbaro adag oo ka dhan ah 6-da waaweyn waxay la micno ahayd inay ahaayeen tartan wanaagsan laakiin had iyo jeer way ka gaabiyeen kulamadii ay ahayd inay guuleystaan. Waxaan rajeynayaa in Fulham ay ka soo kaban karto dhabarka midig laakiin Scott Parker iyo kooxda ayaa runtii u baahan inay wax ka qabtaan dhaq dhaqaaqan yo yo.
Saadaalin – Waxaan idhi Fulham dib ayey u dhici doontaa laakiin waxay ku jirtaa dagaal heerka labaad ah inta badan xilli ciyaareedka.
Leeds United – 9aad (59 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore – (Championship Champions)
Muxuu xilli u ahaa Leeds sidii ay ugu soo noqdeen Premier League da ‘ahaan. Qof kastaa wuu ogaa waxa laga filan karo Leeds oo leh qaab ciyaareedkooda kubada cagta ee ka hooseeya Bielsa laakiin cidina run ahaantii ma ogaan ilaa ay bilaabeen xilli ciyaareedka. Leeds ayaa xilli ciyaareedka ku bilaabatay guuldaro 4-3 ah oo ka soo gaadhay Liverpool, waxaana dareemay inaan ogaanay waxa yimid. Waxay gaareen meel sare oo 7aad xilli ciyaareedkan waxayna hoos ugudhaceen ilaa 15aad laakiin runtii sifiican ayay uqabteen qeybtii 2aad ee xilli ciyaareedka si ay isugu dheelitiraan ilaa 9aad. Waxay garaaceen Leicester, Man City, iyo Spurs halka ay barbaro adag la galeen 6da kooxood ee kale. Waxay guuleysteen 18 waxaana laga badiyay 15 taas oo macnaheedu ahaa inay runti ahayd xilli ama xilli. Waxay sidoo kale dhaliyeen 62 waxaana laga dhaliyay 54 taas oo ku sii dartay saadaalintooda. Meslier wuxuu helay 11 nadiif ah oo nadiif ah taasoo aheyd wax soo saar adag halka Bamford uu dhaliyay 17 gool cidna runti kuma taageerin inuu sidaa sameeyo. Harrison wuxuu xilli amaah adag ku qaatay City halka Raphinha uu ahaa xiddig garabka ka ciyaara oo xiiso leh si uu sidoo kale u daawado. Dallas, Ayling, Phillips, Rodrigo dhamaantood waxay ahaayeen ciyaartooy wacdaro dhigay sidoo kale. Waxay ku sigteen inay ku noqdaan Yurub sidoo kale taas oo noqon lahayd waxoogaa waxqabad ah. Haddii Bielsa uu ku dhagan yahay mid ayaa filan kara wax badan oo isku mid ah laakiin Leeds waxay ahayd mid isdaba-joog ah qeybtii dambe ee xilli ciyaareedka waana hubaal inay ku sii dhisi karaan taas saxiixyo cusub.
Saadaalin – Waxaan saadaaliyay Leeds inay ku dhameysan doonto 11-aad isla markaana ay kaliya ka dhici doonto 10-ka sare laakiin waxay si aad ah ugu fiicnaayeen inay dhameystaan ​​9-aad iyo gudihiisa.
Leicester City – 5aad (66 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (5aad – 62 dhibcood)
Leicester waxa ay maamushay 4 dhibic oo ka badan xilli ciyaareedkii hore laakiin haddana waxa ay ku dhameysatay kaalinta 5aad ka dib markii ay weli ku jirtay afarta ugu sareysa inta badan xilli ciyaareedka. Leicester waxay ahayd mid isdaba joog ah muddo dheer laakiin markii ay ciyaarta adkaatay dhamaadka waxay ku guuldareysteen inay ku guuleystaan ​​madaxa ilaa kulamada madaxa. Waxay gaareen meel sare xilli ciyaareedkii laakiin sidoo kale waxay u dhaceen kaalinta 6aad hal dhibic xilli ciyaareedka. Kalabar markay sii socdeen waxay ahaayeen 3-aad waxayna halkaa joogeen ilaa MW 34 ka dib markay dhuminayeen. 3 guuldaro 4-tii kulan ee ugu dambeeyay oo ay kujiraan guul daro lama filaan ah oo 2-4 ah oo ka soo gaadhay Newcastle oo ay weheliyaan Chelsea, Spurs-na waxay ula jeeday inay u dhacday kaalinta 5-aad. Dib u milicsiga inkasta oo ay ahayd xilli fiican, guushoodii hanashada waxay dabcan noqon doontaa ku guuleysiga FA Cup. Guulihii laga gaaray Man City (2-5), Arsenal, Spurs, Chelsea, Liverpool, iyo Man United ayaa sidoo kale xoogaa muujiyey. Castagne iyo Fofana aad ayey u fiicnaayeen Fofana waxay si gaar ah ugu egtahay bilow sameynta. Vardy wuxuu helay 15 gool laakiin waligiis dhulka kuma dhicin halka Schmiechel uu sidoo kale ku guuleystay inuu 11 nadiif ah shabaqa ilaashado. Justin ayaa seegay dhammaadkii, Barnes-na wuxuu lahaa xilli horumar leh sidoo kale. Iheanacho ayaa bilow u ahaa iyaga rubuc dhamaadka xilli ciyaareedka waxayna rajaynayaan inuu sii wado qaab ciyaareedka xilli ciyaareedka soo socda. Leicester ayaa ciyaari doonta kubada cagta Europa League, waxaana Rodgers uu doonayaa inuu sii aado tartanka markan. Bartilmaameedka kale wuxuu noqon doonaa inuu sii wado loolanka afarta ugu sareysa markana uu kusii sugnaado halkaas dhamaadka xilli ciyaareedka.
Saadaalin – Waxaan lahaa Leicester oo ku dhameysaneysa 8aad sidaa darteed 5aad ayaa ka fiican taas laakiin marwalba waxaan dareemayay inaysan ku dhamaan doonin afarta sare.
Liverpool – 3aad (69 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (1aad – 99 dhibcood)
Liverpool ayaa qasaaro lama filaan ah kala kulantay Villa horaantii xilli ciyaareedka laakiin dad badan ayaa dareemay inay aheyd wax aan caadi aheyn oo ka badan wax walba. Luminta Van Dijk, iyo Gomez waxay ahayd dhabar jab weyn horaantii halka ay lumisay Matip, Fabinho, Jota, iwm dhibco waqtigooda sidoo kale. Iyadoo aan loo eegin in Liverpool ay fadhiisatay kaalinta 1aad dhammaadka MW 16. Hoos u dhaca ayaa bilaabmay wixii markaa ka dambeeyay waxayna gaareen heerka ugu hooseeya ee 8aad hal dhibic. Dhaawacyadii ugu weynaa waxay la yimaadeen qaab guryeedkii xumaa ee 2021. Khasaaradii ka soo gaadhay guryahoodii kooxaha Burnley, Brighton, Man City, Everton, Fulham, iyo Chelsea waxay la macno ahayd inay kuwa kale dhulka ka lumeen. Guushii weynayd ee ay gaadheen waxay ka gaadhay Man United MW 34 taasna waxay ku dhiirrigelisay inay badiyaan 4-ta kulan ee u hadhay si ay u dhammaystiraan kaalinta 3-aad iyada oo ay uga mahadcelinayaan kooxaha hareerahooda ah oo iyaguna dhibco iska lumiyay. Thiago waqti ayuu qaatay si uu ula qabsado laakiin dhab ahaantii wuxuu aaday dhamaadka xilli ciyaareedka laakiin Jota wuxuu ahaa muujin bilowgii xilli ciyaareedka kahor inta uusan dhaawacmin. Mane ma uusan helin xilli ciyaareedyadii ugu fiicnaa halka Firmino uu sidoo kale ahaa mid xishood la’aan ah. Salah oo leh 22 gool ayaa ahaa mid joogto ah inkasta oo uu qayb weyn ka ahaa sababta ay Liverpool ugu dhamaysatay afarta sare. Marka la eego duruufaha oo dhan kaalinta 3-aad ayaa guul adag u ah Liverpool. Xilli ciyaareedka soo socda waxay u baahan yihiin inay maalgashadaan kooxda isla markaana abuuraan qoto dheer oo aad u liidata. Ciyaartoyda dhaawaca ah waxay u baahan yihiin inay sidoo kale taam ahaadaan. Waxaan rajaynayaa in Liverpool ay xilli ciyaareedka dambe ku soo laaban doonto iyada oo tartan ku jirta iyada oo waliba horayba ugu soo iibsatay Konate booska daafaca dhexe.
Saadaalin – Waxaan filayay in Liverpool ay ku dhameysan doonto 2-aad inkasta oo aysan cidina ogeyn sida ay u liito xilli ciyaareedkan.
Manchester City – 1aad (86 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (2aad – 81 dhibcood)
City ayaa ku guuleysatay inay hesho 5 dhibcood oo ka badan tii xilli ciyaareedkii hore laakiin waxaa lagu daray xilli ciyaareedyadii la soo dhaafay Carabao Cup oo ay la qaadatay Carabao Cup kale iyo tan ugu muhiimsan oo ah horyaal kale. Aan ku xusno waxay weli ku jiraan finalka Champions League. City ma aysan helin bilowgii ugu fiicnaa waxaana guuldaro 2-5 ah kala kulantay Leicester horaantii. Marka loo eego MW 9 waxay kujireen 9aad miiska. Kiciintooda ayaa runtii bilaabatay ka dib MW 12. 6 guul ayaa soo raacday taas oo micnaheedu yahay in MW 19 ay ahaayeen kuwa ugu sareeya miiska. Waxay kudareen 7 guul oo dheeri ah taas oo micnaheedu yahay inay si adag gacanta ugu hayaan booska koowaad. 4 guuldaro 12-kii kulan ee ugu dambeeyay waxay la micno ahayd inay lumiyeen xoogaa cagaarsho ah aakhirka inkasta oo ay wali 12 dhibcood ku dhameysteen hogaanka horyaalka. Faa’iidada weyn ee City waxay aheyd qoto dheeridii kooxeed ee ay heysteen. City asal ahaan waxay laheyd labo koox oo ugu horeysay kuwaas oo xamili kara xaddiga ciyaaraha waqti yar gudahood. Xaqiiqda ah in gooldhaliyaha ugu sareeya City uu ahaa Gundogan oo leh 13 gool ayaa muujineysa inay sidoo kale ka maqnaayeen weeraryahan caafimaad. Waxay wali dhaliyeen 83 gool. De Bruyne ayaa helay 12 caawin halka Ederson uu ilaaliyay 19 shay oo nadiif ah madaama uu ku guuleystay galoofis dahabi ah xilli ciyaareedkii 2aad. Torres wuxuu lahaa xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee fiican halka Ake uu ku maqnaa dhaawac soo gaaray awgiis. Saxiixa furaha wuxuu ahaa Ruben Dias. Dias wuxuu adkeyntaas u keenay afarta daafac dhab ahaana inuu weli yahay 23 waxay la micno tahay in City ay heysato halyeey saf ah. Dias ayaa laga yaabaa inuu ku guuleysto ciyaaryahanka sannadka waa sida uu u fiicnaa. City waa hubaal inay si firfircoon uga shaqeyn doonto suuqa kala iibsiga xagaaga, weeraryahan ayaana weli ah aagga ugu weyn ee maalgashi lagu sameyn karo. Aguero ayaa ka tagaya 10 xilli ciyaareed oo uu joogay kooxda, Kane ayaana u muuqda bartilmaameed iyaga. Haddii City ay ku dari karto Harry Kane kooxdooda markaas waxay noqon doontaa mid adag iyaga oo ku garaacaya hogaanka xilli ciyaareedka soo socda.
Saadaalin – Waxaan lahaa City oo ku guuleysata horyaalka wayna sameeyeen.
Manchester United – 2aad (74 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (3aad – 66 dhibcood)
Manchester United iyo Ole waa mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ugu waa weyn. Waxay heleen 8 dhibcood oo ka badan kii xilli ciyaareedkii hore waxayna ku dhameysteen kaalinta 2aad sidoo kale. Manchester United ayaa ku bilaabatay xilli ciyaareedka si liidata waxayna gaadhay heerka 15aad ee MW 4 kadib markii ay guuldaro kala kulantay Spurs 1-6. Ole wuxuu u maleynayay inay taasi micnaheedu tahay inuu xiray dukaanka. Waxay ahayd wax badan oo ku saabsan helitaanka natiijada wixii markaa ka dambeeyay. Ole iyadoon loo eegin waxa dadku rabaan inay yiraahdaan waxay leedahay koox United ah oo ciyaareysa 45 daqiiqo oo kubada cagta ah oo adag oo kaliya inay badiso kulamada marka ay gaaraan goolal. 45 daqiiqo FC haddii taasi wax tahay. Waxay gaareen dusha sare ee miiska MW 18 laakiin markaa waxay sii ahaadeen 2aad inta ka dhiman xilli ciyaareedka. Guul 9-0 ah oo ay ka gaaraan Southampton ayaa hubaal noqon doonta mid soo jiidasho leh. 12 guul hal gool waa waxa ku socda cilladaha muhiimka ah. Kuwaasi maahan guul halka United ay ka talin jirtay oo kaliya ay ku xiiqday mucaaradka. Kuwani waa guul halkaasoo laga yaabo in kooxaha ka soo horjeedaa ay ka fiicnaayeen laakiin United ayaa heysatay Fernandes ama Cavani ama De Gea oo goolka dhaliyay taasoo xallisay khiyaamada. Ole waa hal maamule nasiib badan tirada badan ee go’aamada VAR ee ku socda jidkiisa runti waxay muujineysaa in nidaamka la iibsan karo. Iyadoo aan loo eegin inkasta oo ay been abuur tahay illaa aad ka dhigeyso waxaan u maleynayaa oo Ole ayaa sidaas sameynaya. Waxa Ole haysto waa lafdhabar adag laakiin De Gea oo laga yaabo inuu baxo Henderson ma noqon karaa hogaamiyahaas dhanka dambe. Maguire, Fernandes, iyo Cavani waa lafdhabarta kooxda. Mid ka mid ah waad ka soo bixi doontaa gaar ahaan Fernandes kooxduna way burburi doontaa. Fernandes ayaa 18 gool dhaliyay 12 kalena caawiye ka noqday Premier League xilli ciyaareedkan inkasta oo qaar ka mid ah ay ahaayeen rigoorayaal. Ciyaaryahan adag iyadoo aan loo eegin. Cavani sidoo kale sifiican ayuu u ciyaaray intii lagu jiray qaybtii dambe ee xilli ciyaareedka wuxuuna kordhiyay qandaraaskiisa isagoo uga mahadcelinaya qaab ciyaareedkiisa. Maxaa ku xigi doona United? Taageerayaashu waxay leeyihiin dhaqdhaqaaq Glazer ah oo socda laakiin Glazers ayaa daba socda Sancho si ay u qanciyaan taageerayaasha. United ayaa u baahan daafac dhexe iyo CDM inkasta oo ay doonayso in ay horay ugu sii socoto miiska kala saraynta. Sida Ole, weli waxaan u maleynayaa in nasiibkiisa ay qasab tahay inuu mar uun dhammaado. Waxay weli ku jiraan finalka Europa League…
Saadaalin – Waxaan lahaa United oo ku dhameysaneysay kaalinta 5-aad ama 4-aad laakiin mahad waxaa leh Fernandes, Cavani, iyo De Gea oo ku guuleystay inay dhameystaan ​​kaalinta 2-aad.
Newcastle United – 12aad (45 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (13 – 44 dhibcood)
Newcastle ma aysan helin xilli ciyaareedyadii ugu fiicnaa waxayna la dagaallamayeen dagaal u laabashada inta badan in kasta oo aysan waligood hoos ugu dhicin aagga dib u celinta. Waxay ku guuleysteen inay dhammaystiraan meel iyo dhibic ka sarreysa xilli ciyaareedkii hore taas oo ah wax togan. Bilawgii xilli ciyaareedka ee liita waxay arkeen iyaga oo fadhiya 16th kalabadh xilli ciyaareedkii waxay ahaayeen 17th at MW 34 laakiin natiijooyin kama dambays ah oo qurux badan afartii kulan ee ugu dambeysay waxay la macno tahay inay ku dhammaysteen kaalinta 12aad. Guushaas 2-4 ay ka gaadhay Leicester waxay noqon doontaa mid si gaar ah u macaan oo ay weheliso xoogaa barbaro ah oo ka dhan ah 6-da koox ee ugu sareysa. Hendrick, Wilson, Fraser, iyo Lewis ma aysan helin xilliyadii ugu fiicnaa ee xilli ciyaareedyadii ugu horreeyay ee kooxda inta badan maxaa yeelay waxay la kulmeen dhaawacyo qaarkood oo u diiday inay gaaraan muddo badan. Willock oo amaah lagu soo iibsaday bishii Janaayo ayaa fure u ahaa inkasta oo uu dhaliyay 7 gool 7-dii kulan ee ugu dambeeyay. Steve Bruce wuxuu qabtay shaqo adag, waxaana qabaa inuu fursad u helo inuu ku dhiso wixii ay Newcastle sameysay xilli ciyaareedkan. Haysashada waxyaabaha ay jecel yihiin Saint-Maximin waxay fure u noqon doonaan halka Willock amaah kale lagu helayo ama iibsashadiisu ay noqonayso saxiix weyn. Lahaanshahaas cusub ee ay taageerayaasha Newcastle rabaan weligood runtii uma muuqdaan kuwo hirgalay.
Saadaalin – Waxaan saadaaliyay in Newcastle ay dhameysan doonto inta udhaxeysa 10-ka ilaa 13-aad sidaas ayay sax ku noqotay.
Sheffield United – 20aad (23 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (9aad – 54 dhibcood)
Waxay ahayd xilli la ilaabo Blades-ka. Sanadkii la soo dhaafay wuxuu ahaa olole adag laakiin wixii ka dambeeyay bilow fiican ee Premier League markii ay lumiyeen taageerayaashooda dhammaantood waxay aadeen Koonfurta. Waxaan aragnay tan iyo bilowgii mashruuca dib u bilaabashada in Sheffield United ay la ildaran tahay taageerayaal la’aanta taageeraysa ciyaartoy la’aanta taasna waxay kusii socotaa xilli ciyaareedkan. Waxay kaliya ku guuleysteen kulankoodii ugu horreeyay ee MW 22 waqtigaas oo ay durba ku qoto dheeraadeen aagga dib u celinta. Luminta Chris Wilder sidoo kale faa iido malahan waxayna ku laabteen Horyaalkii iyagoo aan ogeyn waxa soo socda. Khatar la’aanta xagga hore ah ayaa ku soo kordhisay dhibaatooyinka. Ramsdale wuxuu ahaa saxiix wanaagsan laakiin aan ka aheyn cidna saameyn kuma yeelan. Waa wax aad u badan dib-u-dhiska hadda ee Blades laakiin uma arko inay dib ugu soo laabanayaan Premier League. Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee ay la soo noqdaan waxay waligood xusuus fiican u noqon doontaa iyaga.
Saadaalin – Ma aanan fileynin Sheffield United inay ku dhameysan doonto 10ka ugu sareysa laakiin ma aanan fileynin dib u dhac.
Southampton – 15aad (43 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (11aad – 52 dhibcood)
Southampton sifiican kuma bilaaban laakiin MW 13 waxay kujireen kaalinta 4-aad ee kala saraynta kadib dib u soo kabasho. By MW 19 inkasta oo ay ku dhufteen hoos u dhac qaab ahaan ah waxayna fadhiyeen kaalinta 10aad miiska. Hoosudhacaasi wuu sii socday waxayna ku dhameysteen 15aad. 17-kii kulan ee ugu horreeyay ama wixii ka dambeeyay ayay Southampton heshay guulo waaweyn gaar ahaan kulankii Liverpool. Waxay la kulmeen markale 9-0 qasaaro ah xilli ciyaareedkan markan Man United waana dhibic aad u hooseysa. Saxiixyadu wax saameyn ah oo dhab ah ma sameynin sidoo kale Southampton sidoo kale dhowr dhaawac ayaa soo gaaray xilli ciyaareedkaan oo dhan sidoo kale. Haysenhutl oo ilaashanya ayaa khaanad u ah Southampton laakiin waa inay isaga taageeraan. Suuqa kala iibsiga ee ugu dambeeyay ma fiicna waxayna ku darayaan ciyaartooy taam ahaan kara sidoo kalena ku fiicnaan kara shaqadooda. Southampton waxay leedahay karti iyo maamule ku dhameysan kara meel sare.
Saadaalin – Waxaan filayay inay ku dhameysan doonaan 10-aad xilli ciyaareedkan inkasta oo taasi aysan dhicin.
Tottenham – 7aad (62 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (6aad – 59 dhibcood)
Spurs ayaa laga badiyay kulankoodii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka laakiin ka dib waxa ay sii galeen guuldarro la’aan 11 kulan ah oo MW 12 ay la micno tahay inay hogaanka u hayaan miiska kala sarreynta. By MW 19 inkasta oo Spurs ay wali ku jirtay kaalinta 4-aad ee kala saraynta isla markaana ay si fiican u qabanaysay Mourinho. Qaar ka mid ah khasaarooyinkii waaweynaa ayaa xigay inkastoo MW 33 Spurs uu ahaa kii 7aad waxaana Mourinho la ceyriyay kaliya hal usbuuc ka hor finalka Spurs Carabao Cup. Waxay ahayd wax lagu qoslo waxayna magacaabeen Ryan Mason oo markaa lumiyay Spurs-na waxay kudhamaatay kaalinta 7aad si kastaba. 7 ayaa Spurs ka heli doonta boos ka mid ah kulamada cusub ee European Conference League xilli ciyaareedka dambe halkaasoo si xiiso leh ay ugula kulmi karaan Jose Mourinho oo maamuli doona AS Roma. Maalintii ugu dambaysay Spurs waxay garaacday Leicester taas oo heshay 7aad laakiin waxay sidoo kale la micno ahayd in markii ay garaaceen Foxes ay Chelsea xaqiijisatay afarta ugu sarreysa iyo Champions League. Taasi waa wax Spurs ah inay ku dhacdo iyaga. Guushii ay 1-6 kaga gaareen Old Trafford ayaa xusuus fiican u noqon doonta Spurs inkastoo, taabashada dusha sare ee miiska ay sidoo kale ahayd daqiiqad fiican. Dhanka Tottenham furaha ayaa ah cida ay u magacaabi doonaan xilli ciyaareedka dambe si ay kooxda u maamulaan. Harry Kane sidoo kale wuxuu doonayaa inuu baxo maxaa yeelay wuxuu noqonayaa 28 jir dhowaan waxbana kuma guuleysan. Isla sidaas ayaa loo odhan karaa Wiilka. Eriksen wuu tagay wuxuuna heystaa horyaal Serie A ah magaciisa. Waxay u noqon doontaa xagaaga khiyaano badan Spurs oo markaa kaliya ayaan ogaan doonnaa waxa dhaca xilli ciyaareedka soo socda. Harry Kane ayaa sidoo kale ku guulaystay kabta dahabka ah isaga oo dhaliyay 23 gool iyo abaalmarinta kubad sameeyaha isaga oo caawiye ka noqday 14 kale.
Saadaalin – Waxaan haystay Mourinho iyo Spurs oo dhammeystay kaalinta 4-aad ee xilli ciyaareedkan oo aan ku guuleystay koob. Supers ka aan Mourinho aheyn ayaa ku dhameystay kaalinta 7aad iyo koob la’aan.
West Brom – 19aad (26 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (2aad – Horyaalnimada)
Wejiga hore West Brom wuxuu lahaa daaqad adag oo sidan oo kale ah. Pereira oo joogto ah, Diangana, Robinson, Ivanovic, iyo Gallagher oo amaah kula jooga kuwo kale. Iyada oo Bilic sidoo kale West Brom la filayey in ay u halgameyso badbaadin laakiin ay caqabad weyn ka dhigto. Ma aysan bixin. Bilic ayaa la ceyriyay kadib MW 13 xiligaas oo loo magacaabay Sam Allardyce. Waxaa jiray xoogaa barbaro adag oo ka dhan ah 6-da koox ee ugu sareysa halka Chelsea ay 2-5 kaga badisay Stamford Bridge marwalba waxay noqon doontaa xusuus mudan iyaga. Iyadoo Allardyce uu baxayo inkasta oo West Brom ay u baahan tahay tababare adag oo soo gala kana shaqeeya kooxda. Waxa jira ciyaartoy tayo leh oo halkaa joogta inkasta oo ay ciyaartoydan sii joogayaan ay dood ka taagan tahay.
Saadaalin – Waxaan lahaa West Brom oo u dagaallameysay dib u celinta heerka labaad waana ay sameeyeen waana la reebay.
West Ham – 6aad (65 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (16aad – 39 dhibcood)
West Ham waxay ii ahayd naxdin xilli ciyaareedkii aniga iyo wixii xilli ciyaareed ah oo ay haysteen. Sanado badan West Ham marwalba waxay umuuqataa inay ladagaalamayso hoos udhaca waxayna kudhex jirtaa isku soo bixida fanka sunta ah waxay marwalba umuuqatay inay tahay mid hubaal ah. Xitaa xilli ciyaareedkaan oo dhan Diangana fiasco West Ham iyo Moyes waxay umuuqdeen cadaadis. West Ham sidoo kale sifiican kuma bilaaban xilli ciyaareedka. Markay ahayd MW 19 in kastoo ay kor ugu kaceen 7aad miiska waxayna raadinayeen inay sare usocdaan. Saxiixa Lingard bishii Janaayo runti wax yaabo yaab leh ayay ka shaqeeyeen waxayna gaareen kaalinta 4aad MW 31. Qaab yar oo liita ayaa ka dhigan inay hoos u dhaceen laakiin waxay dib ugu soo laabteen inay xilli ciyaareedka ku dhameystaan ​​6th. Waxaan shaqsiyan u maleynayaa in taageerayaasha aysan garoonka kujirin runti waxay u ogolaatay Moyes inuu ka shaqeeyo kooxda iyo ciyaartoyda iyadoo taageerayaashu aysan madaxiisa u yeerin ka dib natiijo xun. Soucek iyo Coufal waxay ahaayeen soo shaac bixid gaar ahaan Soucek wuxuu ahaa hanjabaad goolal joogto ah oo Fellaini cusub ah. Lingard, iyo Rice oo ay weheliyaan Antonio sidoo kale way fiicnaayeen halka ciyaartoy dhowr ahi ay door ka ciyaarayeen xilli ciyaareedkaan oo dhan. West Ham ayaa laba jeer garaacday Leicester, waxay ka timid 3 nil oo hoos u dhacday si ay Spurs ula gasho goolkaas cajiibka ah ee Lanzini halka ay sidoo kale garaacday Spurs. Qaar ka mid ah barbaro adag oo ka dhan ah kooxaha kale ee 6 sare ayaa sidoo kale halkaas joogay. Waxay u ahayd xilli ciyaareed fiican Hammers taas oo ka arki doonta Europa League xilli ciyaareedka soo socda. West Ham waxay ku qasbanaan doontaa inay si fiican wax u iibsato oo ay wax ku soo darto kooxda inkasta oo tirada badan ee lagu daray ay dhibaato keeni karto. Haatan waxay ku raaxeysan karaan oo ay basque ku gaari karaan guul aad u adag.
Saadaalin – Waxaan lahaa West Ham inay hoos u dhacdo sidaas darteed gabi ahaanba waan ka maqnaa tan.
Wolverhampton Wanderers – 13aad (45 dhibcood); Xilli ciyaareedkii hore (7aad 59 dhibcood)
Wolves waxay gaartay meel sare oo 6th ka dib ciyaartii ugu horeysay laakiin waligeed kama aysan sare marin. Waxay ahayd hoos u dhac joogto ah intaas ka dib mana aysan gaarin heerkii xilli ciyaareedkii hore. Luminta Jimenez dhaawac madaxa ah horaantii xilli ciyaareedka waxay aheyd dharbaaxo weyn maadaama Wolves ay lumisay hanjabaadii goolasha. Hadaf la’aan dhab ahaantii waxay ahayd arrin muhiim u ah iyaga. Semedo iyo Silva waxay ahaayeen saxiixyo sax ah iyaga laakiin cid kale oo runta ifaysa majirto. Guulihii ay ka gaareen Arsenal laba jeer, Chelsea-na waxay noqon doontaa xusuus wanaagsan. Nuno sidoo kale wuxuu go’aansaday inuu ka tago kooxda waxaana laga yaabaa in hada qofkasta oo yimaada uu kooxda u keeni karo kubad xiiso leh inkasta oo dhamaan ciyaartoyda reer Portugal ay ku jiraan kooxda.
Saadaalin – Waxaan lahaa Wolves oo kudhameysa inta udhaxeysa 8aad iyo 10aad markaa waan ku qalday taas.
Waxay ahayd xilli waali ah oo kubada cagta ah. Laga soo bilaabo natiijooyinka waalida ah ee bilowga xilli ciyaareedka, soo laabashada City, Super League, taageerayaal kuma lahan garoonka, iyo fowdo maalintii ugu dambeysay. Amaah waa in la siiyaa FA-ga si ay u maamusho xilli ciyaareedka oo dhan iyada oo aan loo galin hakad kale waxayna u ahayd dib u habeyn dad badan oo guriga ku xaniban. Amaah waa in la siiyaa ciyaartoydu sidoo kale inay ciyaaraan ciyaaro aad u tiro badan oo kalandarka fowdada ah halkaasoo kooxaha qaar ay ciyaareen 3 kulan toddobaad gudihiis mararka qaarkood. Waxay ahayd xilli aad u ballaadhan waxaana rajeyneynaa inaanan waligey arki doonin mid caynkan oo kale ah.